အသက် ၅၀ - ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှုသို့ပြန်လည်ရောက်သွားသည်၊ ယခုပြင်းထန်သော ED - Your Brain On Porn သည်
ငါ 50 နှစ်ရှိပြီပေါ့အမြဲတမ်းတော်တော်အားကောင်းတဲ့လိင် drive ကိုရှိခဲ့တယ်။ ငါ 14 အကြောင်းကိုခဲ့သောအခါငါ porn ရှာဖွေတွေ့ရှိပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာအင်တာနက်ကယနေ့မပုံစံမတည်ရှိခဲ့ပါဘူး။ ငါ 32 အကြောင်းကိုခဲ့သောအခါငါအစာရှောင်အင်တာနက်လေအစဉ်အမြဲငါကတည်းကညစ်ညမ်းအပေါ် binging ခဲ့ကြရတယ်။
ငါကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေတဲ့သူအံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်မိပါတယ်။ ကျွန်မဖြစ်ချင်သည်အစဉ်အမြဲတာခံခဲ့ရပါတယ်သတိပြုမိနှင့်အပင်ငါသည်ငါ့ရည်းစား cum ခဲ့သိတယ်တစ်ချိန်ကကြိုးစားနေတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က PIED ကျွန်မကိုထိသွားတယ်! ငါ၏အရည်းစားနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူ။ ငါနေဆဲ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် masturbating ပေမယ့်အစစ်အမှန်အရာ '' ပျင်းစရာ '' ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မချက်ချင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဤချိတ်ဆက်နှင့်ဤ site ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါတစ်နှစ်ရဲ့အစမှာ FAP ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် 38 ရက်အကြာမှာငါ '' ကုသ '' ခံခဲ့ရသည်။ ခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူ, ကောင်းမွန်သောလိင်, စိတ်ကူးအာရုံနှင့်ငါ့နှလုံးအထဲကပေးခဲ့သည်ရှေ့မှာအော်ဂဇင်ရှိခြင်း။ ကျွန်မအလွန်လျင်မြန်စွာ '' Reboot လုပ်သွား '' ရှိသည်ဟုရန်အလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါစောင့်ကြည့်ခဲ့ဗီဒီယိုပြဿနာဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးသို့ရောက်ကြ၏။ ဤနေရာတွင်ပေါ်လူများစွာအစီရင်ခံတင်ပြလိုပဲ, ငါ့အရသာပြောင်းလဲငါမရှိတော့ငါ့အလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ '' ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ '' နှင့်အတူပြုသောအမှုနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ငါအချို့ပျော့-Core ပုံရိပ်တွေကြောင်းကောက်ချက်ချဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်မျှမလိင်သို့မဟုတ်ထိုးဖောက်မှုအပေါ်အချို့သောဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများကို, အမျိုးသမီးများထွက်စစ်ဆေးနေစတင်ခဲ့ပြီးကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းကျနော် masturbate မဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့အမှား!
ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်နှစ်တစ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ယခုပျော့-Core ဝတ်လစ်စလစ်၌ငါ၏အကျိုးစီးပွားခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပြမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဤသည်ထို့နောက် fetish ရုပ်ပြ (နေဆဲဗီဒီယိုများမရှိပါ) ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါနေဆဲ fetish ပုံရိပ်တွေမှ masturbating မှတဆင့်လယ်ပိုင်းလမ်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လအကြောင်းကိုငါ့အအာရုံသို့ရောက်ကြ၏။ ငါ edging ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါမှပြီးမြောက်ရန်စုံလင်သေးသ image ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒီအပြင်, ငါ2လအတွင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ခဲယဉ်းအလုံအလောက်ရရှိရန်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါ Flat-တန်းစီနောက်တဖန်ရယ်နှင့်ဤအချိန်ကကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘောင်းဘီတိုအတွင်း၌သေမင်းကဲ့သို့ခံစားရ၏။ ငါသည်ငါ့ 31nd reboot သို့2ရက်ပေါင်းရယ်နှင့်ဤပိုပြီးလေးနက်ယခင်တစျခုထက်ခံစားရပါတယ်။ ငါဒီအဆင့်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကွောငျးအခြို့သောအရိပ်အမြွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအချိန်ငါဘာမျှမခံစားရသည်။ အမှုအရာနောက်ဆုံးအချိန်တိုးတက်လျှင်ငါသူတို့ကဒီအချိန်လိမ့်မည်သေချာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါထွက် freaking မဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် '' ကုသ '' ပြီးမှငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်လိင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ယခုတဖန်ငါပြန်လည်စတင်ရန်ရှိခြင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအလွန်အမျက်ထွက်တာပါ။
ငါလူတိုင်းကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသိသည် reboot ကွာခြားပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုမှလေးစားမှုနှင့်အတူငါ၏အကြံအစည်တချို့ရှိနေပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ အစာရှောင်ခြင်း streaming များညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအကဲခတ်တစ်ခုတည်းသောပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအားလုံး porn ပါပဲ။ ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်နှစ်တစ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ကိုယ့်ပျော့ပုံရိပ်တွေမှာရှာဖွေနေသည်ဤရုပ်ပုံများကိုမှ masturbating မှဦးဆောင်ရသောခက်ခဲပုံရိပ်တွေမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ယခုငါ (တကယ်တော့သူကစတုရန်းတဦးတည်းထက်ပိုဆိုးခံစားရ) ကျောစတုရန်းတဦးတည်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ အဘယ်သူမျှမစိုက်ထူ။ အဘယ်သူမျှမနံနက်သစ်သား။ porn ကိုကြည့်ငါ့ရည်းစားရှိသော်လည်းမတရားသောစာရေးမေတ္တာစေရန်အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ,
ဒါကြောင့်သင်ရုံ (မသက်ဆိုင်သည့်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ၏) အချိန်နည်းနည်းသတ်ပစ်ရန်အတွက်အနည်းငယ် porn ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လို့ရပါတယ်မထင်ကြပါ။ သင်အမှန်တကယ် porn နှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းပိတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏ခါးကိုပြန်အချို့သောဘဝကိုခံစားရရန်စတင်သောအခါ, အနည်းငယ် PMO session တစ်ခုနှင့်အတူကထွက်စမ်းသပ်ရန်မဟုတ်ပါပါနှင့်။ ကိုယ့်ခက်မရနိုငျသောကွောငျ့အကြှနျုပျသဖြင့်လက်ရှိပြားချပ်ချပ်လိုင်းစဉ်အတွင်း masturbating မဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်ငါ့ယခင်ပြားချပ်ချပ်လိုင်းစဉ်အတွင်း masturbate ခဲ့ပါဘူး။ စိုးရိမ်ထိတ်လန်ဖို့မကြိုးစားပါ။ ငါအလေးပေးတာတဲ့အခါမှာအတူတူကစောင့်ရှောက်မှာတော်တော်လေးကောင်းသောပေါ့သော်လည်းငါ့ဒစ်အသေဖြစ်၏နဲ့တူပါကယ့်ကိုခံစားရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်ငါအခြို့သောအဓိပ်ပါယျမရှိသောအတှေးအရှိခြင်းခဲ့ကြရတယ်။ နောက်ကျောကိုခြေရာခံပေါ်မှာသူတို့ဘဝရဖို့ကြိုးစားနေလူတိုင်းကံကောင်းပါစေ။ ငါ porn လိင်ရှိသည်ဖို့ငါ့အစွမ်းရည်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်နိုင်ပေမယ့်ဂယ်ရီနှင့်ပေါ်တင်လိုက်တယ်အခြားလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကလုပျနိုငျငါတို့သည်အဘယ်သို့ယင်း၏သက်ရောက်မှု reverse နိုင်ပါတယ်အရာကိုသိစောင့်ကြည့်ယုံကြည်သောဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
LINK - ငါကပြန်ဖွင့်ပြီးနောက် porn ကိုကြည့်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံပါလိမ့်မယ်ထင်!